Dareenka Raga Maxaa Kiciyo - Erayo Jaceyl Dareen Leh - Cishqi
Dareenka Raga Maxaa kiciyo – Baro Erayo Jaceyl Oo Dareen leh
Dareenka raga maxaa kiciyo, Sidee loo kiciya dareenka raga, waa kuwee erayada ay raga jecelyihiin, su,aalahaasi iyo suaalo kale waxaad kaga bogan doontaa Cishqi.net.
Dareenka raga maxaa kiciyo
Dareenka raga maxaa kiciyo: Baro erayo jaceyl oo dareen leh
Markii aad rabto inaad kiciso dareenka raga uma baahnid wax sidaa u weyn kaliya inaad adeegsato erayada raga ay jecelyihiin. Dumar fara badan ayaa aaminsan in ay adag tahay kicinta dareenka raga laakin taasi waa qalad.
Haddii aad u dirto erayadaan soo socdo ninkaaga adigaaba xaqiiqsan doono in aysan ahayn wax adag sida loo kiciyo dareenka raga.
Guri Markuu furan yahay waxaa geli karo qof walbaa laakin markuu xiran yahay waxaa geli karo qofka furahaasi heysto. Sidaas si lamid ah raga waxay jecelyihiin xaaska heysato furahaasi.
Ma kula tahay in xaas walbaa ay heli karto furahaas? Jawaabta macquulka ah: Maya.
Hadaba yee heli karo? Jawaabta: Kaliya sowjada taqaano waxa uu ninkeeda jecelyahay iyo waxa uu necebyahay.
Dareenka raga: Maxay jecelyihiin raga?
Markaad suaashani si sax uga jawaabto waxaa taqaana waxa ay ragu jecelyihiin. Waxaa laga yaabaa dumar fara badan inay ku jawaabaan.
Naago badan sida afar xaas
Sida inuu guursado afar naag.
Haweenka tan ugu quruxda badan
Tan ugu jirka macaan
Tan isu qurxisaa
Waa sax raga weey jecelyihiin dumarka nuucaas ah iyo in ay guursadaan afar xaas laakin haddii aad adigu taqaano sirta kale ee aysan dumarka wada aqoonin, waxaaa hubaal adigoonan qurux badneyn inuusan ninkaaga naag kale damceynin.
Haddii aad taqaano sida raga loo soo jiito uma baahnid wax kale. Kaliya inaad fahanto waxa dumarka kale aysan fahansaneyn. Waxaa suurto gal ah inaad aragto heblaayo oo aan quruxsaneyn hadana qabto nin lacag leh oo aanan guursaneynin naaga kale.
Ama waxa laga yaabaa inaad aragto heblaayo qabto nin qurux badan balse iyadu arageeda laga cararayo. Sabab? Sababtoo ah waxay fahansan tahay waxa ay raga jecelyihiin. Waxay dumarka kale dheer tahay wax ka muhiimsan quruxda dumarka.
Maxay yihiin waxaasi oo ay dumarka kale dheer tahay?
Wax kale ma dheero dumarka ee waxay taqaanaa sida loo dego qalbiga raga tusaale:
Qaabka loo soo jiito raga
Qaabka loogu raaxeeyo raga
Sida loo kiciyo dareenka raga
Erayada raga ay jecelyihiin
Sida loo sasabo raga markeey xanaaqaan
Qaabka loogu labisto raga
Dharka loo xirto raga xiliga galmada
Sida loo farxadgeliyo raga
Sida loo dhiiro geliyo raga
Markaad intaasi si sax ah u taqaano, iska ilow inay naag kale ninkaaga kula wadaagto. Markaad isticmaasho erayadaan dareenka leh misana u dirto waxaad arki doonto ninkaaga ooba kugu waalanayo misana kuu soo dirayo fariimo jaceyl ah oo dareen leh.
Erayada dareenka raga kiciyo ka hor inta aysan bilaabanin galmada
Raaxada ma ahan oo kaliya inaad jirkiisa u raaxeyso, baashaaliso ee sidoo kale waa inaad marka hore u raaxeysaa qalbigiisa. Markuu qalbiga raaxo ka dareemo ayuu jirkana ka dareemayaa.
Ma taqaanaa sababta ka dambeyso taas?
Wax kale ma ah ee raaxadu marka ugu horeyso waxay ka bilaababtaa maskaxda. Tusaale, raga markeey buuq ku furan yihiin sida murugo, daal iyo inuusan ku qanacsaneyn noloshiisa, ragaasi waxay u baahan yihiin in la dejiyo maskaxadooda kadibna loo nasteexeeyo.
Ka waran Markaad ninkaaga ku furto buuq Markuu baxayo, ma kula tahay inuu imaanayo asigoo faraxsan? Jawaabta waa iska cadahahay: Maya. Hadaba ka ilaali ninkaaga waxyaabahaasi si uusan kaaga caajisin misana noloshaada ugu faraxsanaado.
Erayo jaceyl oo lagu soo jiiito dareenka raga
Erayadani waa erayo jaceyl oo ay dumarka ku soo jiidan karaan raga waana erayo isugu Jiro kuwa dareenkooda lagu kiciyo iyo kuwo lagu amaano. U dir qeybta aad is dhaheyso ninkaaga wuu jecelyahay ama wuu ka helaa erayo nuucaan ah.
Adeegso xiliyada ku haboon sida xiliga dareenkaagu uu aad u kacsanyahay. Hana iloobin inaad iska ilaaliso todobadaan sheey ee mamnuuca ka ah xiliga galmada.
Halkaan ka akhriso: Raaxada sariirta ka hor marxaladahaan
Erayada macaan ee kiciya dareenka raga
Kaliya waxaan ka fakarayaa markii ugu dambeysay ee aan wada joogno. Waxaan dareemay wax aan caadi ahayn.
Qiyaas waxa aan sameyn doono, xiliga aan ku arko?
Mararka qaarkood shumiskaaga oo kaliya ayuu dareemaheygu ku kacaaa.
Ma taqaan qaybta ugu xasaasisan jirkayga?
Wax kastaa oo yar oo aad sameyso, waxay igu abuureysaa jaceyl iyo kalsooni.
Ma sugi karo inaan hadhow ku shumiyo.
Ma sugi karo caawa… Waan ku faraxsanahay kaliya inaan ka fikiro!
Waa maxay sheeyga kaliya ee aad rabto inaan kuu sameeyo oo aadan weligaa iloobi karin?
Ma sugi karo inaaan caawa guriga ku kulano.
Goorta aad daafaha wareegeyso, jirkeyga oo idil wuu yaqaanaa.
Waxaan rajeyn in aad hadda ila joogto.
Waxaan kuu diyaarinooyaa cashadii aad jecleyd, ma sugi karo inaad guriga timaado.
Waxaan rabaa caawa in aan caruurta ciyow seexiyo, sidee u aragtaa?
Ma sugi karo caawa…. Aad baan u jiriricoonayaa inaan taa ka fikiro.
Caawa sariirta tartan?? Waxaa laga yaabaa inaad ku guuleysato bilad dahabi ah!
Maxaan xirtaa caawa? Dooqaada?
Waxaan ka fikirooyaa in aan caawa kula casheeyo, Sidee u aragtaaa?
Waa maxay waxa ugu dareenka badan ee aan kuu sameyn karo goorta aan ku arko?
Waa maxay kalarka aad ugu jeceshahay inaan hoos ka xirto, kaliya cajiib, waad ogtahay waa goor dambe.
Aan kulano caawa aniga iyo adi, waxaan rajeyn inaad jeclaan doonto halka ay ku dhamaaneyso .
Waxaan ku lumay Indhahaaga, waxaan dareemayaa Nabad taabashadaada. (Marka u sharax sida ay u dhaqaaqdo midkastoo dareenkaaga ah.)
Hadii aad iga codsan lahyd inaan ku guursado markale, waxaan kuugu jawaabi lahaa haa iguurso markale. Ma taqaanaa sababta taa ka dambeyso? Ma ahan wax kale ee jirkeyga ayaa taabashaada u riyaaqo.
Qiyaas hadda waxa aan hada ka fikirooyo?
Ma rabtaa wax? iska fahan.
Ma sugi karo caawa??
Aniga iyo adi caawa…..
Ma xasuusataa aniga iyo adi habeenkii na isugu keen horeeysay? Aan xusno caawa..
Waxaan jeclaan lahaa inaad hadda ila joogtid adigoo waxba xirneen.
Caawa aan hubino in albaabku si sax ah uu u xiran yahay, kaliya waxaan rabaa inaan guto mid Kamid ah waajibaadkeyga.
Caawa goorta aad guriga imaaneysid, ma xiran doono nigis, sababtoo ah gudaha ayaan ka ololayaa.
Weli waxaan ka fikirooyaa wixii xalay dhacay. Waan ku jeclahay.
Mar kastaa oo aad gacmahaaaga isaarto waan dhalaalaa!
Aan kugu tuso caawa qolka jiifka sida aan kuugu mahad noqo.
Aan kulano. Qolkeena. Caawa. 8:30 fiidnimo.
Caawa waa habeen jimco ah, Maxaa jeceshahay inaan kuu sameeyo?
Maaddaama aadan halkaan ila joogin, waxaan dareemayaa in qayb weyn oo iga mid ah la la’yahay. Ma sugi karo inaan kula caweeyo markale. Aad baan kuu jeclahay.
Gcaliyahayga qaaliga ah! Runtii waan u xiisay taabashadaada diiran iyo hadaladaada dareenka leh.
Waxaan halkaan cidlada ah kaga fikirooyaa adiga oo kaliya, waxaan kuu rajeynayaa habeen qurux badan
Xaaskaaga oo kuu hamuun qabto. U dir sawir ka tujumayo inaad u xiistay.
Erayada raga ay jecelyihiin inay ka maqlaan xaasaskooda
Waxaan ku jeclahay sida aad ii jeceshahay, waad ku mahadsantahay inaad habalaha oo idil aniga iga dooqatay.
Waxaan jeclahay markaad gacanta iga qabaneyso.
Waan kuu xiisay. Imaaw guriga.
Aad Ayaan ugu faraxsanahay inaad tahay ninkeyga.
Aad Ayaan ugu faraxsanahay inaan guursado ninka riyadeydii ahaa.
Waqtigu wuu duulayaa markaad ila joogto laakin markaad iga maqan tahay maba soconayo. Aad baan kuugu xiisay. Waan ku jeclahay.
Waxaan kuugu xiisay sida wadnaheygu uu u garaacmo. Fadlan ii imaw oo ka caawi nafteyda sidii aan mar kale isu heli lahayn.
Waxaan kuu xiisay boqolaal jeer in ka badan intaad waligaa ii xiisi lahayd.
Waan kuu xiisaa daqiiqad walboo aadan hareerahaaga joogin, mana sheegayo been.
Qalbigaygu wuxuu dareemaa kali ahaansho, marka aadan dhinaceyga joogin. Ii imaaaw mar dhaw gacaliye.
Waxaan hawada kuu soo marinayaa xiiso iyo jaceyl aanan dhamaan. Fadlan ila kulan sida ugu dhaqsaha badan.
Erayada dareenka leh ee loo diro raga xiliga hurdada
Ma doonayo inaan sii riyoodo maxaa yeelay waxaad tahay riyada nool ee noloshayda.
Waxaad tahay amiirka riyadayda. Indhaha isku qabo oo dhankaaga iga fiiri. Habeen wanaagsan.
Waxaad had iyo jeer tahay ninka riyadeyda ah oo ay dareemaheygu ku shaqeeyaan. Habeen wanaagsan.
Jirkaaga iyo maskaxdaada xoogaa nasasho sii. Waxaan kula rabaa maalinta ugu fiican maalin walbaa. Habeen wanaagsan jacaylkayga. Hubso inaan ku jiro riyadaada.
Kama hor istaagi karo inaan ku dhunkado adigoo hurda. Waad ogtahay, markaan arko wajigaaga oo hurdo, waxaan helayaa dhammaan farxadda adduunka. Habeen wanaagsan amiirkaygiyow.
Seexo adiga oo og, waxaad noqon doontaa qofka ugu dambeeya ee aan ka fikiro iyo qofka ugu horreeya ee aan ka fikiro markaan ku soo tooso qorraxda oo ifaysa iyo shimbiraha oo qeylinayo.
Habeen kasta, waxaan rajeeya in dayaxu weynaado oo iftiimo, adiguna aad farxad dareento. Hadaba markaad nalka damiso, niyada ku hayso inaan adiga kugu riyoonayo. Habeen qurux badan ninkeyga.
Waxa kaliya ee aan sameeyo maalin kasta waa inaan sugo mar kale inaan adiga kula jiro. Maalinteyda oo dhan waxay ku wareegsan tahay rajada ah inaan habeenkeyga ku qaato laabtaada.
Waan ogahay inaad tahay xidiga dareemaheyga, nafteydu ay u hadaaqdo.Taasi waxaan ku ogaaday markaan kala maqannahay. Waxaan dareemayaa in aanan dhameystirneyn. Marnaba ma doonayo inaan noqdo keli, Qof bilaa adi ah, Habeen wanaagsan Cawaale.
Maalinba maalinta ka dambeysa jaceylka aan kuu qabo wuu sii kordhaa, ma fahmin sida ay wax u dhacaan, laakiin si uun baan u maareeyaa, macaanow, ma sugi karo berri inaan ku sii jeclaado in ka badan inta aan ku jecelahay. Habeen wanaagsan.
Waxa kaliya ee aan jeclaan lahaa ayaa ah in habeennada aan wada joogno aysan waligood dhammaan. Markaan kala maqanahay, uma adkaysan karo runtii. Habeen wanaagsan, jacaylkayga.
Erayad dareenka leh ee lagu dhaho raga subax wanaagsan
Waqti xaadirkaan, waxaa laga yaabaa inaad iga fogtahay oo aan kumanaa mayl isu jirno laakiin waxaad had iyo jeer ku jirtaa qalbigayga. Aad baan kuugu xiisay. Subax wanaagsan.
Waxaan kuu balan qaadayaa inaan waligeey ku garab taagnaan doono oo aan noqon doono gacalisadaada, saaxibadaada iyo xaaskaaga. Subax wanaagsan ninka aan dunidaan ku leeyahay.
Ninkeyga Qaaliga ahow, waxaan rabaa inaan kula noolaado maalin kasta, nolosheyda adigaa bilow iyo dhamaadba u ah. Ma noolaan karo adiga la’aantaa. Subax wanaagsan.
Xalay adigaan kugu riyooday, subixiina wajigaaga oo aan arkin ayaan ka murugooday. Aad baan kuugu xiisay. Subax wanaagsan.
Subax wanaagsan macaankeyga. Waxaan rajeynayaa inaan ku arko dhawaan. Ma sugi karo inaan ku arko oo aan isku kaa duubo. Maalin wanaagsan!
Meel kasta oo aad joogtid, si kastaa oo aan u kala fog nahay, waxaa na isu soo dhaweynayo dareenka qurux badan ee inaga dhexeeyo. Ma sugi karo inaan shaarka kaa bixiyo. Subax wanaagsan.
Subaxnimadu way qurux badan tahay markaan kaa soo hoos kacayo! Ninkeyga Qaaliga Ahow, Subax Wanaagsan.
Subax wanaagsan! Waad ku mahadsan tahay inaad i toosisay! Adigaan kugu riyoonayay. Waxay ahayd riyo qaraw leh.
Waxaad tahay dhiirigeliyahayga iyo raaxeeyaheyga. Adiga ayaa sabab u ah inay noloshaydu qurux badan tahay, riyadayduna ay midabbo badan tahay.
Ma lihi rabitaan kale oo nolosha ah maxaa yeelay adigaan ku heystaa. Waxaa ii rumowday riyooyinkii ugu quruxda badnaa ee aan ku riyoon jiray nolosha. Subax wanaagsan ninkeyga, ninka jirkeyga taabashadiisu u bogo.
Waxaan dareemayaa in la ii soo duceeyay markaan soo kaco oo aan arko suuradaada qurxoon. cadceedkaygiyow subax wanaagsan.
Subax wanaagsan, jaceylkeyga. Subaxdaydu waxaad moodaa inay maran tahay adiga la’aantaa. Kuu xiisay.
Subax wanaagsan macaane, ma soo kacday? mise waxaad habeenkaaga ku qaadatay dhafar sidii aad aniga iiga fikireysay.
Galiyahayga qaaliga ah! Subax wanaagsan, Runtii waan u xiisay taabashadaada diiran iyo hadaladaada dareenka leh.
Qaabka loo dhaho raga waan ku jeclahay
Raga sidaan ayaa loo dareensiiyaa jaceylkaaga
Dumar fara badan ayaa rabo in ay dareen siiyaan raga jaceylka ay u qabaan sidaa darteed waxay adeegsadan erayada ah „Waan ku jeclahay“ laakin ma ahan erayo sidaa macno weyn ugu sameynayo raga xittaa haddii ay ogyihiin inaad jeceshahay.
Waan ku jeclahay waxaa yaqaano ama isticmaalo qof walbaa. Sidaa darteed waa muhiim inaad ka duwanaato dadka kale. Ku dheh erayadaan saaxiibkaaga, jaceylkaaga si aad ugu sarbeebto inaad jeceshahay.
Xusuusnow: Raga waxay aad u jecelyihiin in loo sarbeebo hadalka.
Maalintaan adiga ku bartay wax walbaa waxa ay ii noqdeen wax kale
Waxaad muujineysaaa in ay wax badan iska kaa badaleen, waxaad u qireysaa inaad jeceyl u qaaday. Qofkii erayadaas la dhaho wuxuu dareemayaa jaceyl dhab ah iyo dareen qurux badan.
Adiga ayaan mar walbaa kuu joogaaa
Ka waran haddi aad lamaanahaaga weydiiso in uu ku caawiyo misana erayadasi kuugu jawaabo maxaad dareemi laheyd? Jawaabta macquulka ah waa: wuu i jecelaaday. Sidaa darteed xiliyada lamaanahaaga u baahanyahay caawintaada ku dheh erayadaasi.
Mararka qaarkood erayo aad u fudud dhihidooda ayaa waxa ay noqon karaan kuwo farxad leh oo uu lamaanuhu dareemo jaceyl iyo kalsooni buuxda. Haddii aa rabto in aad dhisto kalsoonida jaceylkaaga ku dheh erayadaaasi.
Ma rabtaa inaan isku duqowno?
Markaad qof si dhab ah u jeceshahay waxaad jeclaaneysaa inaad noloshaada la qaadato qofkaasi inta noloshaaada ka dhiman. Taasi waxa ay muujineysaaa jaceylka dhabta ah ee aad u heyso ninkaaga.
Markaan adiga kula joogo waxaan dareemaa amaan
In aad dareento amaan, naxariis, farxad waxa ay muujineyso dareenka dhabta ah ee aad qalbiga ku heyso. Hadaad qalbiga naxariis ka dareentona waxa ay ka dhigan tahay in uu jeceyl ku haleelay.
Adiga la,aantaa ma dhameystirni
Noloshu kuma qurux badno keli ahaansho, Qof aadan jecleyna lama noolaan kartid, noloshaadana ma dhameystiri karo, keliya qofka nasiibka u yeeshay in aad qalbigaada u hibeyso. Sidaa darteed ku dheh ninkaaga erayadaasi, sababtoo ah raga aad ayeey u jecelyihiin in ay maqlaan erayadaasi.
Waxaa tahay boqorkeyga
Ma Jiro wax qurux badan in lagu dhaho raga „Waxaa tahay boqorkeyga“ mana ahan erayo aad dhihi karto qof walbaa marka laga reebo ruuxa qalbigaaga ku leh booska ugu quruxda badan. Sidaa darteed haddii uu jiro qof sidaas u kasbaday qalbigaada, haka baqiilin inaad ku tiraahdid.
Waxaan rajeyn in aad hadda ila joogto
Maxaa ka qurux badan mar walbaa la joogista ruuxii aad naftaada u hadiyadeysay? Jawaabta: Dabcan waxna.
Waxaan rajeyneynaa inaad la dhacday qormooyinkaan qalbiga soo jiidanayo. La soco qormooyin kale oo xiiso leh. Haddii aad jeceshahay inaan kuu soo dirno qormo kastaa oo aan diyaarino, waxaad iska diiwaan gelin kartaa halkaan hoose oo aad gelin kartaa emailkaaga kadibna anagaa kula socodsiineyo.
Wixii Cusub Caalamkaa Jecel – Cishqi
Qoraa: Maxamed Somali
Raali Galinta Ninka: Baro sida loo sasabo raga si fudud
Erayo jaceyl oo dareen leh misana qalbiga taabanayo
Xushmad Jaceyl: Baro Erayo Sarbeeb Ah
Erayo xikmad leh oo anfacayo haweenka iyo raga
Hadafka Nolosha: Baro Sida Loo Gaaro Guusha
Guurka Wanaagsan: Baro 16 Talo Oo Muhiim Kuu Ah